Myanmar Cyber War Reloaded Video ( MM Vs BD ) | Myanmar Black Hacking
1 Myanmar Cyber War Reloaded Video ( MM Vs BD )
Op_BD သို့Cyber War ဆင်နွှဲခဲ့ကြတုန်းက အကြောင်းအရာတစ်ချို့ ကို နောက်ခံတင်ဆက်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းတိုလေးတစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည်အသက်သွင်းထားတဲ့ Video လေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ
မြန်မာဟက်ကာတွေရဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသို့ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ကြတာဟာ မြန်မာတွေရဲ့ ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲတစ်လျှောက်မှာ အတော်ဂယက်ထသွားစေခဲ့တဲ့ ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်မမှားလောက်ပါဖူး :)
ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲကို အရင်ကြေငြာတာကတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဟက်ကာတွေဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာတွေက အရင်လက်ဦးရယူခဲ့ပြီး ဆိုက်ဘာစစ်ပွဲနွှဲခဲ့ကြတာပေါ့ဗျာ ( ကိုယ်တေလည်း ddos လေးနဲ့ တတ်သလောက်လေးကူထိုးကြတာအမှတ်တရပါပဲ ) စစ်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့အခါ နောက်ဆုံးတော့လည်း မြန်မာတွေပဲအနိုင်ရခဲ့တာပါပဲ :)
Documentary and footage of Myanmar Hackers in action which
took the upper hand during the clash within Bangladesh vs
Myanmar. This documentary made to honour for Myanmar Cyber
Army consists of Blink Hacker Group, Myanmar Hacker Unite4m,
Myanmar Cyber Defense Army, Myanmar Noob Hackers and other Myanmar Black Hat Hackers.
Go To Watch Here
ဒီဗွီဒီယိုကို ဖန်တီးတင်ဆက်ပေးတဲ့ အဖွဲ့ နာမည်ကတော့ မမှတ်မိတော့ာစိတ်မရှိပါနဲ့ :3
သိသူတွေတစ်ချက်လောက်ပြောစေချင်ပါတယ် ပြန်ပြီး update ပေးမှာပါခင်ဗျ :)
Feb 10, 2019, 10:37:00 PM